Berri Apple ayaa mar kale la yaabi doonta xogta maaliyadeed ee rubuca afraad | Waxaan ka socdaa mac
Berri Apple mar kale ayuu la yaabi doonaa xogta maaliyadeed ee rubuca afaraad
Berri, Oktoobar 29, Apple waxay soo saari doontaa warbixin la socota xogta maaliyadeed ee rubuca afaraad. Saadaashu waxay tahay in shirkaddu ay ku kacday isla heerka labadii rubuc ee hore ee hore. Xaqiijinta iyo xaqiijinta inay tahay oo ay ahayd shirkadda kaliya ee awood u leh inay soo saarto faa'iidooyinka saafiga ah ee xilligan adag sida tan oo kale ayaa ah tan adduunka oo dhami la kulantay Coronavirus darteed. Qiyaasaha shirkadaha khaaska ah waa kuwo aad u wanaagsan.
Dakhliga ku saabsan $ 64 bilyan rubuc afraad xogta maaliyadeed
In kasta oo Apple aysan bixin wax hagitaan ah oo dakhli ah rubuca afaraad sababo la xiriira safka faafa ee coronavirus, sida ku dhacday rubuc saddexaad, haddana waxaa la filayaa inay ka soo gudubtay muddadan dhib la'aan. sidii xilliyadii hore ee sanadkan. Xaqiiqdii, saadaasha falanqeeyayaasha saamiyada (Wall Street) ayaa ah inay soo sheegi doonto faaiido ku dhow $ 64 bilyan marka loo eego xogta maaliyadeed ee rubuca afaraad ee ay maareeyaan.
Saadaashaani waxay ku soo aadeysaa tirooyin la helay kii la helay rubuca afaraad ee 2019. Tan macnaheedu waa in kasta oo Apple aysan abuurin koboc dhaqaale isla muddadaas sanadkan. Haa way ku guuleysatay inay sii joogto. Waa waxqabad, maxaa yeelay sanad "caadi ah", oo aan aafo caalami ah ka dhicin, waxay awood u yeelatay inay soo saarto 64-ka bilyan ee macaashka ah. Sanad 2020 ah oo leh dhibaatooyin badan, wuxuu awooday inuu kasbado isla. Intee in le'eg ayay tagi lahayd haddii uusan cudur faafin jirin?
Qaar ka mid ah maalgashadayaasha iyo falanqeeyayaasha, hoos u dhig himilooyinkaas:
Falanqeeye Katy Huberty wuxuu soo jeedinayaa in saadaasha Apple ee hadda Wall Street ee bilaha Sebtember ay aad u sarreyso oo waxay ku saleysan tahay filashooyinka aadka u daran ee iPhone-ka.
Daryanani wuxuu saadaaliyay in Apple rwaxay keeneysaa dakhli dhan 62 bilyan oo doolar. In yar ka yar inta lagu qeexay Wall Street.
Waxa cad waa taas xogta maaliyadeed ee rubuca afaraad way fiicnaan doontaa. Berri waan arki doonnaa oo shaki ayaan ka tagi doonnaa.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Xanta » Berri Apple mar kale ayuu la yaabi doonaa xogta maaliyadeed ee rubuca afaraad
MGM iyo gaar ahaan Apple waxay rabaan inay heshiis ka gaaraan filimkii ugu dambeeyay ee James Bond.